The Best Forex ngosi Akaụntụ nke April 2021 | Full Beginners Guide
Akaụntụ Ngosipụta Forex kacha mma 2021 - Nbudata Nmalite zuru ezu
Obi dị m ụtọ maka ndị ahịa, ihe ngosi ngosi akaụntụ na-enye gị ohere ịnwale akụkụ dị iche iche nke azụmaahịa azụmaahịa na-enweghị itinye ego gị tara ahụhụ. Naanị ụfọdụ atụmatụ ị nwere ike ịnwale maka nnwale ule bụ nyocha teknụzụ, ntinye ego, zụta ma ree iwu, yana ọbụlagodi robot akpaaka na-azụ ahịa na nnọchite gị.
Ọ dị ka ngosipụta aka na-egosi nke ahịa ahịa Forex dị adị ma dị ka. Ga-ere ahịa ego abụọ, na ịgagharị nyocha niile nke teknụzụ na teknụzụ nke ga-adịrị gị site na akaụntụ azụmaahịa azụmaahịa nkịtị.
Akụkụ kachasị mma banyere ya bụ na ịkwesighi itinye ihe egwu ọ bụla mgbe ị na-ekpebi ịzụta ma ọ bụ ree. Dị ka ndị dị otú a, ma ị bụ onye ahịa ma ọ bụ onye na-azụ ahịa n'oge a, ị nwere ike ịmeghachi ọnọdụ ahịa ụwa na-enweghị ihe egwu na-etinyekarị.
Na nke a Best Forex Demo Account 2021 - Full Beginners Guide, anyị na-aga ịkọwapụta ihe niile a maara banyere Forex maka akaụntụ demo - gụnyere otu esi amalite, uru na ọghọm, yana atụmatụ atụmatụ azụmaahịa demo.
Kedu ihe bụ Forex Demo Account?
N'ikpeazụ, ihe ndekọ ego ngosi kachasị mma na-enye ndị ahịa ohere ịzụta na ire ngwa ego, niile na-enweghị itinye otu penny. N'ọtụtụ oge, mgbe ị mepere akaụntụ na ụlọ ọrụ na-ere ahịa n'ịntanetị, ị ga-enwe ike iji azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa na-azụ ahịa (nke pụtara, n'ezie, ị naghị eji ezigbo ego gị).
Ebumnuche kachasị nke akaụntụ ngosi bụ iji nyere gị aka ịnwale ọnọdụ ahịa dị adị n'ezie, ha niile na-enweghị ihe egwu ọ bụla n'ihi na enweghị ego dị mkpa iji bido. Dị ka e kwuru, a ga-achọkarị ka ị jiri onye na-ere ahịa azụmaahịa n'ịntanetị ka ịmalite iji nweta akaụntụ ngosi. Site n'ime nke a, ị ga-enwerịrị ohere ịbanye na ahịa azụmaahịa ụwa site n'aka onye na-ere ahịa ahụ.
N'ọnọdụ ụfọdụ, a ga-enye gị akaụntụ ngosi ahụ site na ikpo okwu desktọọpụ dị ka MT5 ma ọ bụ MT4. N'ebe ndị ọzọ, ọ ga-enwekwa ike ịnweta gị site na ihe nchọgharị gị. Akaụntụ akaụntụ ngosi gị ga-egosipụtakarị ihe na - eme na azụmaahịa azụmaahịa - nke pụtara na ị ga - azụ ahịa site na ọnọdụ ibi ndụ. Mf akaụntụ ngosi enyeghi nke a ị kwesịrị ịchọ nyiwe ọzọ ka ị gaghị enweta uru zuru ezu.
Uru na ọghọm nke Akaụntụ Akaụntụ Forex
Dokwesighi ịkwụnye ihe ọ bụla iji jiri akaụntụ ngosi
Ọ bụ ụzọ zuru oke iji nwalee usoro azụmaahịa ọhụrụ gị
Howghọta otú ndị ọrụ ntanetị si arụ ọrụ
Muta otu esi eji ihe akpaaka trading usoro
Nwalee ndị na-enye ọrụ mgbama
Ọ dị mma maka ịmụ banyere ahia n'ịntanetị gburugburu ebe obibi
Ọ dị mfe iwepụ na-ewere nnukwu ihe ize ndụ ị nwere ike ọ gaghị abụ na ị na-azụ ahịa
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe agaghị ekwe omume ịnweta mmetụta mmetụta uche ọ bụla dị adị mgbe ị na-efunahụ ma ọ bụ na-emeri ego
Kedu ihe enwere ike iji Akaụntụ Akaụntụ Kachasị Mma?
Agbanyeghị na ilele gị anya mbụ, ọ nwere ike iyi ka akụkọ ngosi maka ndị na-amalite amalite, nke a abụghị eziokwu. N'ezie, newbies nwere ike iji akaụntụ ngosi maka ịmụ ụdọ nke Forex. Ma ha bụkwa nnukwu ụzọ maka ọbụna ndị ahịa nwere ọkaibe iji nwalee usoro azụmahịa dị iche iche na usoro dị iche iche - ha niile n'achọghị penny nke ezigbo ego gị.
Ndi otu ndi okacha-amara anyi edeputala ihe nile kpatara anyi ji che na ihe ngosi ihe ngosi kacha nma kwesiri oge gi na nchebara echiche.
Ndị ahịa ọhụụ
Ọ bụ ezie na akụkọ ngosi ngosi bụ maka onye ọ bụla, ekwesịrị ịsị na enwere uru doro anya maka ọhụụ ọhụụ. N'ụzọ bụ isi, ọ nwere ike ịbụ nnukwu ụzọ iji mụta ọrụ dị n'ime na usoro nke ịzụ ahịa ego. Ọbụna ma ọ bụrụ na ịtọbeghị ire ma ọ bụ zụta ihe tupu ma amaghị ebe ị ga-amalite, ịnwere ike ịnwale ya na-enweghị itinye isi obodo gị n'ihe ize ndụ.
Ghọta Iwu Asọ
Otu n'ime ihe mbụ ikwuru ebe a bụ na iji akaụntụ ngosi ga-enye gị nghọta ka mma banyere etu ahịa ahịa si arụ ọrụ.
Fọdụ n'ime ndị nkịtị iwu tinye n'ọrụ na Forex trading ahịa bụ:
Were iwu bara uru
Ihe ndị a niile bụ iwu nke na-enyere onye na-azụ ahịa azụmaahịa gị aka ịghọta ihe ịchọrọ ịme na ihe ọzọ ị ga-aga bụ. N'ezie, mgbe ị na-eji ihe ndekọ ego demo kacha mma, ị nwere ike inweta ezigbo nghọta etu iwu ahịa ndị a si arụ ọrụ. Nke kachasị mkpa, ị ga-eme nke a n'enweghị ihe egwu nke ịmehie mmefu ego dị oke ọnụ.
Nyochaa mmeghari ego
Mgbe ị ruru ọkwa ebe ị maara nke ọma maka ahịa ahịa na otu ha si arụ ọrụ na azụmaahịa Forex, ị nwere ike ịgafe na-amụ usoro ahịa. Site na inyocha onodu onodu ugwo a, igha enweta ezigbo ihe omuma banyere otu ngwa oru ego na agha n’ime ahia.
Atụmatụ Njikwa Ewu Egwu
Ikpuchido iwu gi na nghari ojoo ojoo n’ahia di nkpa. Otu n'ime ihe kpatara iji akaụntụ demo Forex eme ihe bara uru bụ na ọ na-enyere gị aka ịmezi atụmatụ nke njikwa ihe egwu gị. Nke a nwere ike ịchebe gị nnukwu nsogbu nke nrụgide n'ọdịnihu.
Ọ bụrụ n ’ileghara iji usoro ihe egwu egwu anya kuziere onwe gị, ọ ga-abụrịrị na ị ga-enwetakwu ọghọm n’ikpeazụ.
Anyị na-eche na ịghọta mgbasa dị ezigbo mkpa n’ihi na ọ nwere ike imetụta ike gị ịme uru site na azụmaahịa Forex. Dị ka ndị dị otú a, ọ bụrụ na ị ka bụ ntakịrị nke novice mgbe ọ na-agbasa, mgbe ahụ ị ga-erite uru site na iji akaụntụ ngosi ngosi.
Otu n'ime ụzọ kachasị mma iji mụtakwuo banyere otu esi agbasa ọrụ bụ iji ohere akaụntụ gị were mee ihe ọ bụla n'ihi na nke a ga-egosipụta mgbanwe ọnụego na ụbọchị azụmaahịa, yana n'oge.
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ahịa nwere ahụmahụ na-eji ihe ndị e ji eme ihe eme ihe n'ụzọ zuru ezu, ebe ọ bụ ụzọ dị irè iji bulie isi obodo ahia. N'ezie, ọtụtụ ihe na ndụ nwere ihe megidere ya na itinye ego, nke a nwekwara ike ịpụta na kama ịkwalite ọnọdụ gị, ọ nwere ike ịga n'ụzọ ọzọ wee bulie mfu gị.
Ọ bụ n'ihi nke a ka anyị ga-atụ aro ịmụ ins na out of leverage site na akaụntụ ngosi tupu ime nke a site na iji ego ụwa. Zọ a, ị na-enwe ike ịhụ ihe ọma, ọjọọ na jọrọ njọ mgbe ọ na-abịa ahia na oke.
Na ime nke a, ị ga-enweta nghọta ka mma banyere leverage bụ, na-enwe ekele na yana ọ bara uru yana ọ nwere ike ghara ịgahie.
Gbalị si a Broka
Ihe ngosi ngosi na-enwu n'ezie ma a bịa n'ịchọpụta ndị na-ere ahịa ọhụụ ọhụụ. Nke a bụ n'ihi na iwepu mkpa idobe ego ọ bụla, ị ga-ahụ etu azụmaahịa azụmaahịa si arụ ọrụ n'ime ahịa azụmaahịa dị ndụ.
Ozugbo ị nwere obi ụtọ na nsonaazụ ngosi ngosi ahụ, ị ​​nwere ike ịga n'ihu ịmepe akaụntụ ọkọlọtọ na onye na-ere ahịa ị họọrọ. N'ezie, anyị agaghị akwado ime nke ahụ ozugbo, ebe ị ga-ebu ụzọ hụ na ị ghọtara nke ọma etu ahịa azụmaahịa si arụ ọrụ.
Ingkụzi Nka na ụzụ
Mụta ụdọ ahịa azụmaahịa gụnyere ọtụtụ nyocha teknụzụ, chaatị dị na ya na 'ịmụ ihe site na ịme'. Educkụziri onwe gị usoro dị iche iche nke nyocha ga-enye gị ohere ka mma nke ịga nke ọma na azụmaahịa azụmaahịa gị n'ịntanetị.
Na a nutshell, oru analysis bụ Usoro nke ịgụ Forex chaatị dị iche iche. Echiche bụ isi na-amụ akụkọ ihe mere eme na nke ugbu a iji gosipụta ebe ọnụ ahịa ọnụ ahịa ga-aga n'ọdịnihu.
Ndị na-egosi teknụzụ na-adaba n'otu n'ime edemede ndị a:
Oscillators: Ejiri ya mgbe enweghi ike igosi na ahia di iche. Ọ bụ ihe na-egosi countertrend, yabụ kwuo okwu.
Bill Williams Ndị na-egosi: Onye ama ama ama ama ama na ahịa nke mepụtara ọtụtụ ihe ngosipụta na usoro aghụghọ. Ihe ngosi ndị a na-abụkarị oscillators.
Atorsdị ihe ngosi: Tna-enyocha site na algọridim na-eji ọtụtụ ihe na-agagharị agagharịS (ụbọchị 100, ụbọchị 50, wdg).
Ndị na-egosi olu: Akaụntụ maka olu, ọnụ ọgụgụ ọnụahịa na-agbanwe n'oge etiti oge akọwapụtara.
Ndị na-egosi ntanetị - Ọ na-abụkarị nke ọnụahịa dị elu na ọnụ ala dị ala, na-ejikwa nlezianya.
Nanị ole na ole n'ime ihe ngosi ọrụ aka eji eme ihe bụ:
Bollinger ìgwè - ihe na-adịghị mma ma dị mma.
RSI - ikwu ike index bụ ewu ewu oscillator
Nzuzo - ọzọ hugely ewu ewu oscillator
Oscar - egwu dị egwu ka oscillator, ma ihe ngosi Bill Williams.
Fibonacci Iweghachi - nke a na-egosi ebe nguzogide na nkwado na-ebu amụma ime.
MACD - ihe acronym maka Mbugharị Nkezi Mgbanwe, na-egosi nkezi abụọ na-agagharị.
CCI - aka Commodity Channel Index, bu ihe ngosi ama ama ama nke eji ama otutu otutu (dika Stochastics na RSI)
A na-atụ aro ka ị jiri ihe karịrị otu ihe ntanetị na-arụ ọrụ na nkà ọgụgụ ọgụgụ gị. N'ụzọ dị oke mkpa, ọ nweghị ụzọ ka mma iji nweta ezigbo nghọta banyere nke a karịa iji akaụntụ ngosi ngosi iji gosipụta n'efu - nke pụtara na ịkwesighi itinye otu penny n'ihe egwu.
Atụmatụ ahia ohuru
Ọbụna ndị ahịa nwere ahụmahụ na ndị ruru eru na-eji akaụntụ ngosi. Ahịa ego bụ ebe na-agbanwe agbanwe, n'ihi ya, ọ bụ ihe ezi uche dị na iji akaụntụ ngosi iji mee ụfọdụ usoro ịzụ ahịa ọhụrụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ihe rụrụ ọrụ n'ọnwa gara aga nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma taa, yabụ ọ bụ ihe ezi uche dị na ịnọ otu nzọụkwụ n'ihu ndị asọmpi azụmaahịa gị!
Oge nwekwara ike ịbịa oge ịchọrọ ịnwale ihe ọhụụ na ụzọ egwu. Ọzọkwa, nke a na-eme ka akụkọ ngosi ọhụụ dị oke ọnụ.
Dịka onye ahia, enwere ike ịbịa oge ebe otu atụmatụ anaghị arụ ọrụ nke ọma dịka i chere na ọ nwere ike. Mana, site na ịnwale nke a site na akaụntụ ngosi, ị nwere ike ime mgbanwe na ndozi n'ụzọ. Na mgbe ị na-eche dị ka gị atụmatụ bụ n'ezie na-akwụ ụgwọ ma na-aga ịhazi, mgbe ahụ ị nwere ike itinye nke a n'ọrụ na ezigbo azụmaahịa azụmaahịa ma nwee obi ụtọ na uru.
Nwaleenụ Trading Signals
Ihe ịrịba ama na-agbasawanye na ebe a na-ere ahịa n'ahịa n'ịntanetị. Ọtụtụ mgbe, nke a bụ nkwanye ịbanye ahia n'otu oge ma ọ bụ ọnụahịa, na otu ụzọ ego otu. A ga-emepụta mgbaàmà a ma ọ bụ site na robot forex ma ọ bụ onye nyocha mmadụ n'ezie.
Agbanyeghị enwere ike ị nweta obere ụgwọ iji nweta ọrụ mgbaama na-aga, akaụntụ ngosi ahụ ga-enye gị ohere ịnwale nke a. Enwere ike iji akara gị rụọ ọrụ na akaụntụ ngosi yana yana usoro ndị ọzọ na usoro tupu ịmalite ihe egwu nke ọrụ dị ogologo oge.
Otu ihe bara uru banyere akaụntụ ngosi ngosi azụmaahịa bụ na ịnwere ike ịnwale ọrụ mgbaàmà na-enweghị mgbakasị ahụ maka ịtụfu ọtụtụ tọn na usoro a. Ozugbo ị mechara nyocha gị, ịnwere ike iche echiche banyere ma ị chere na akara ngosi ga-abụ ezigbo azịza gị ogologo oge. Ọ bụrụ na ị kpebie na ha abụghị, ndị na-ekwenye ekwenye ga-enye gị nkwụghachi zuru ezu.
Accountsfọdụ akaụntụ ngosi ngosi ga-enyere gị aka ịnwale usoro azụmaahịa dịka ndị ndụmọdụ ọkachamara (aka EAs) ma ọ bụ robot forex.
Ihe kachasị mma ịme bụ ịchọta onye na-ere ahịa na ntanetị nke na-enyere gị aka ịnweta MT4 ma ọ bụ MT4. N'ime ime nke a, ị ga-enwe ike imeghe akaụntụ demo forex na saịtị a na-ere ahịa ma budata ngwanrọ ahụ na ngwaọrụ gị. N'oge a, ị ga-achọ ijikọ sọftụwia azụmahịa gị na robot akpaaka na-akpaghị aka, ebe nke a na-enye ohere maka ngwanrọ akpaghị aka iji nwee ike ịzụ ahịa na nnọchite gị.
N'ezie, ihe kachasị mkpa icheta ebe a bụ na ị na-eji akaụntụ ngosi dị adị iji zụọ ahịa. Dị ka ndị dị otú a, ọ nweghị ezigbo ihe ọ bụla nye gị ma ọ bụrụ na robot na-akpaghị aka na-eme ka ị nwee ego ma ọ bụ na ọ bụghị. Y’oburu n’inwe obi uto na oru ndi robot a na-aru na igwe na-aruchitere gi n’onodu, inwere ike iwebata oge nile wee gafee na ezigbo ahia ahia ahia nke ndi Forex.
Ndabere na Akaụntụ Akaụntụ Forex
Ekwesịrị ikwu na e nwere ọtụtụ ọghọm mgbe ọ na-abịakwute akaụntụ ngosi ngosi. Na nke mbụ, nke a bụ na ọ nwere ike ịdịrị gị mfe iwepụ site na ịnwekwu ihe egwu (ịmara na ọ gaghị akwụ gị ụgwọ). Ya mere, o nwere ike ime ka ị nwee ụgha na-atụ anya olileanya ma a bịa n'ịzụ ahịa na ezigbo ego.
Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịnwe pasent nke 50% mgbe ị jiri akaụntụ ngosi efu maka ọtụtụ ụbọchị ma ọ bụ izu wee chee na azụmaahịa dị mfe. Ihe kachasị njọ ị nwere ike ime dịka onye ahịa na-enweghị uche na-agba ọsọ na onye na-ere ahịa azụmaahịa gị, tinye ego na akaụntụ azụmaahịa gị, wee bido ịzụ ahịa n'ezie, jiri ezigbo ego.
N'ụzọ dị mwute, naanị n'ihi na ịzụ ahịa azụmaahịa nwere ike ịdị ka ọ dị mfe na akaụntụ ngosi ahụ, nke a apụtaghị na ọ ga-abụ n'ahịa ahịa azụmaahịa. Nsonaazụ nke iwere ya dị oke egwu nwere ike ịdị njọ maka nguzozi ụlọ akụ gị.
Na ngwụcha, ihe ndekọ ego ngosi ga - eduga gị itinye nnukwu ihe egwu karịa ka ị ga - eji ego gị mee. Inwe mmetụta nke ịnọ n'ihe ize ndụ nwere ike iduhie gị n'echiche ụgha nke ịnọ ná ntụkwasị obi, ma eleghị anya mee ka o yie ihe dị mfe nke aghụghọ.
Nke a gbadata na ihe akpọrọ 'Forex psychology'. nke a na-ezo aka na mmetụta atọ kachasị emetụtara nke ndị ahịa gosipụtara mgbe ha na-eme mkpebi dị mkpa na ahịa.
Mmetụta 3 ndị a bụ ndị a:
Egwu / irighiri akwara: Tọ na-akawanye njọ, ohere ị ga-enwe iji mee ihe n'ihi ụjọ. Nke a nwere ike iduga gị itinye ọbụna ihe egwu ka ukwuu iji merie mmejọ gị.
Anyaukwu / mpako: Ọ bụrụ na ọ dị gị ka ị na-enwe obi ụtọ na nnukwu azụmaahịa, ma ọ bụ na-eche na nnukwu ihe egwu kwesịrị oge gị, enwere ohere dị elu ị nwere ike inwe anyaukwu. Kama, ikwesiri ilele azụmaahịa azụmaahịa dịka njem dị ogologo oge.
Obi ụtọ / nkwenye: Ndị ahịa na-enwe mmetụta nke a oge ọ bụla ha banyere ahịa. Nke ahụ dị mma ma ị nwere ike iri nri a site na nkwenye siri ike na njedebe ikpeazụ nke azụmaahịa.
Obi ike nke na-abịa site n'inwe anyaukwu nwere ike ịbụ ihe dị mma n'ịzụ ahịa, mana ọ nwekwara ike ime ka onye na-azụ ahịa nwee isi. Nke a nwere ike ibute usoro ịme mkpebi adịghị mma mgbe ị na-azụ ahịa azụmaahịa. Imirikiti ndị ahịa ga-enweta ọnwụ n'otu oge - ma ọ bụ izu na-acha uhie uhie ma ọ bụ naanị ọnọdụ ọjọọ ọ bụla ọzọ.
Ndị ahịa nwere ahụmahụ na-amakarị mgbe ha ga-egbutu ihe ọghọm ha ma mụta ihe site na mmejọ ndị gara aga tupu ha agaa. Nsogbu bụ na ndị ahịa na-enweghị ahụmịhe a na-eme mkpebi ndị dị oke egwu ma mesịa gbaa onwe ha ọkụ.
Ndị na-azụ ahịa na-enweghị nsogbu bụ ndị tufuru usoro atụmatụ njikwa ihe egwu ha ma ghara iji ezigbo nyocha ọrụ nyocha nwere ike ịkwụsị usoro ahụ bara uru na otu mkpebi ọjọọ. Dị ka nke a, tọ isi ihe na-echeta bụ na iji a ngosi akaụntụ pụtara na ị na-agaghị enweta ezi obi mmetụta nke trading ahụmahụ.
Enwere uru na ọghọm na akaụntụ ngosi gị, mana ị gaghị enwe otu mmetụta ahụ ị ga-enwe na ụwa n'ezie, jiri ezigbo ego. Mee elu mee ala, ọtụtụ ga - arụ ụka na ị nwere ike ịghọta phycology azụmaahịa ozugbo ị jiri ego gị na - azụ ahịa.
Esi Họrọ Akaụntụ Ntanetị Forex
Now kwesịrị ugbu a n'ụzọ zuru ezu na akaghị mgbe ọ na-abịa uru na ọghọm nke iji a Forex ngosi na akaụntụ. Dịka, ị kwesịrị ịdị njikere iche maka ịhọrọ ikpo okwu.
N'iburu n'uche na onye ọ bụla na-ere ahịa ga-adị iche iche, anyị ejirila ndepụta nke ihe ị ga-atụle mgbe ị na-achọ ihe ndekọ ego ngosi kachasị mma.
Họrọ a Broka ị na-atụ anya iji
Enwere ike iwere ya dị ka ihe na-adịghị mma maka imefu izu na ịnwale otu onye na-ere ahịa azụmaahịa (na-eji akaụntụ ngosi gị), naanị ịgbanwe ndị na-ere ahịa mgbe ọ bịara ịzụ ahịa na ezigbo ego. Ihe mere ị ga - eji nwee ike rụpụta ihe a abụghị na onye na - ere ahịa ọhụụ nwere ike gbanwee iji rụọ ọrụ azụmaahịa ha n'ụzọ dị iche na nke ikpeazụ, yabụ ị nwere ike ịchọpụta na ọ nweghị mmasị na ụzọ ịchọrọ ịzụ ahịa.
N'ihi nke a, anyị na-enye ndụmọdụ ịmepe akaụntụ ngosi site na onye na-ere ahịa n'ịntanetị ị nwere ike ịhụ onwe gị ka ị na-eji n'ọdịnihu. Emechakwa, mgbe ị na-azụ ahịa na akaụntụ demo forex gị, ezigbo ọnọdụ ahịa ga-adaba.
Nwekwara ike ịchọpụta na mgbasa ozi ego na-agbasa ọdịiche dị n'etiti ndị na-ere ahịa dị iche iche. Ọmụmaatụ, gị demo akaụntụ ore nwere ike na-enye mgbasa nke 0.7 pips na USD / GBP, ebe onye na-ere ahịa azụmaahịa dị iche nwere ike ịbubata ọnụ ọgụgụ dị elu na pips 1.2. Dị ka ndị dị otú a, ọ kachasị mma ịghara ime ka okwu sie ike nke ukwuu ma rapara na onye na-ere ahịa azụmaahịa ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na akaụntụ ngosi ahụ na otu ikpo okwu ha.
Ọnọdụ Ahịa -wa
Dịka anyị metụrụ n'elu, akụkọ ngosi ngosi kachasị mma kachasị mma ga-enye gị ezigbo gburugburu ụwa ahịa. Ma ọ bụghị ya, enweghi oke isi na ngosi.
Ọnọdụ ahịa ndị a n'ezie bụ akụkụ buru ibu nke ịmụ banyere azụmaahịa Forex na iwulite na nka gị dị ka onye ahịa na-aga nke ọma.
Oge nnwale oge ikpe
Mgbe ị hụrụ onye na-ere ahia, na-elele ha oge niile ị ga-enwe ike ịnweta akaụntụ ngosi gị maka. Nke a bụ n'ihi na ụfọdụ ndị na-ere ahịa nwere ike ịhapụ naanị ụbọchị, ndị ọzọ izu.
Iji nweta ezigbo nghọta banyere azụmaahịa azụmaahịa, anyị na-eche na ị ga-achọ opekata mpe otu ọnwa iji wulite ihe ọmụma azụmaahịa gị, yana obi ike gị n'ịghọta ahịa ndị a.
Ngosipụta ngosipụta ngosipụta ngosipụta
Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, ọbụnadị akụkọ ngosi na-ejedebe na oke. Akaụntụ ngosi ọ bụla ga-adị iche na nke a, yabụ ọ dị mma ịlele ozi a tupu ị debanye aha. Offọdụ n'ime ihe ndekọ ego ngosi kachasị mma na-abịa na mbido mmalite nke ihe karịrị $ 100,000.
Chaatị Ngwa ọgụgụ
Ozugbo ị kpuchiri isi, ị nwere ike ịmalite ileba anya na ngwa ọrụ ị ga-enweta site na akaụntụ ngosi ị họọrọ. A sị ka e kwuwe, ngwá ọrụ ndị dị otú ahụ bụ akụkụ dị mkpa nke ịnwale atụmatụ ịzụ ahịa ndị a tụlere tupu ha adị ndụ.
Ọ bụ ezie na ị na-edebanye aha maka akaụntụ ngosi, ị kwesịrị ịmara na ụfọdụ ndị na-ere ahịa azụmaahịa dị n'ịntanetị ga-ajụ gị maka nkọwa ịkwụ ụgwọ gị. Ihe kpatara nke a bụ iji kwụsị ndị mmadụ ịmegbu demo site na imeghe ọtụtụ akaụntụ.
Ndụmọdụ anyị n'eziokwu na nke a? Anyị ga-adụ ọdụ ịhọrọ akaụntụ ngosi nke na-achọghị nkọwa kaadị ndị ahụ. Ebumnuche niile nke ịmalite na demo na-enwe mmetụta na ị ga-enwe nsogbu na ị nweghị ihe ọghọm ma ghara iji ego ọ bụla siri ike nweta.
Ọ bụghị na anyị chere na onye na-ere ahịa na-aga nara gị ego gị n’agaghị arịọ, mana anyị maara na iji nwaa akaụntụ ngosi ego ọ bụghị oke mkpa maka ịnye ozi ịkwụ ụgwọ gị, ọkachasị n’oge a.
Ibido Iji Akaụntụ Ngosipụta Forex
Ọ bụrụ na ị bụ onye ahia, ma ị nweela ma ọ bụ na ọ bụghị, ị ka nwere ike ịnọ na-eche etu ị ga - esi bido na akaụntụ ngosi? Ọfọn, na nkebi nke a kacha mma Forex ngosi na ndu ndu, anyị na-na-na-na na na jikọtara a 5 nzọụkwụ usoro nke ka malitere taa!
1kwụ na XNUMXkwụ XNUMX - Selecthọrọ Forex Broker
Youkwesịrị ịmalite site na ịchọta onye na-ere ahịa n'ịntanetị nke na-enye ndị ahịa otu nhọrọ akaụntụ ngosi. Dịka anyị metụrụ na mbụ, anyị chere na ọ ka mma ịdebanye aha na onye na-ere ahịa nke ị nwere ike mechara hụ onwe gị ịchọrọ iji ezigbo ego emechaa.
Ndị a bụ ụfọdụ ajụjụ ị kwesịrị ịjụ onwe gị tupu ịme mkpebi ikpeazụ gị:
Kedu usoro ịkwụ ụgwọ dịịrị m?
Onye ahia a nwere ikikere usoro iwu?
Kedu akụ nke m ga - azụ ahịa?
N'ihe banyere ọrụ, mgbasa na ụgwọ - ọ bụ onye na-ere ahịa ya na-asọmpi?
Nkwado ndị ahịa nke ndị ahịa ọ dị ka ọ nwere ike ịbụ? (anyị na-akwado ịlele nyocha anyị maka ụdị ihe a)
Ndi MT4 na MT5 na akwado ahia? (Nke a dị mkpa karịsịa maka ịzụ ahịa akpaaka)
Kwụ na 2kwụ XNUMX - Mepee Akaụntụ Akaụntụ Forex
Ugbu a ị meela nke a, ịkwesịrị ịga n'ihu ma mepee akaụntụ. Dị ka e kwuru na mbụ, nke a bụ igbochi ndị mmadụ iji ohere eme ihe ma mepee ihe karịrị otu ngosi ngosi na otu onye na-ere ahịa n'ịntanetị.
Ikwesiri ịbanye ụfọdụ ozi nkeonwe na oge a na nke a na - abụkarị dị ka ndị a:
Kwụ na Selekwụ 3 - Trading Platform Nhọrọ
Ugbu a ị nwere akaụntụ na onye na-ere ahịa gị nke ịchọrọ, ị nwere ike ikpebi ihe ikpo okwu na-arụ ọrụ kachasị mma maka gị na ụdị azụmaahịa gị.
N'ikwu okwu n'ozuzu, nke a na-agụnye ibudata ikpo okwu dịka MT4 ma ọ bụ MT5. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụ ahịa na ihe nchọgharị weebụ gị, ị nwere ike iji interface azụmaahịa onye na-ere ahịa.
Ọ bụrụ na ị do ikpebi ibudata nyiwe MetaTrader (MT4 / 5) mgbe ahụ ị ga - enwe ike ịnwale robot akpaghị aka robot!
4kwụ na XNUMXkwụ XNUMX - Malite Iji ngosi akaụntụ
Dị ka mgbe ị na-ere ahịa na ụwa n'ezie ị nweere onwe gị ịre, zụta ma nweta ahịa. Mgbe ị na-eme nke a, gị ere akwụkwọ a ga - ewepu ego site na njikwa akaụntụ ngosi gị - na - eme ka ọ dị ezigbo adị (na - enweghị ihe egwu).
Ọ bụ echiche dị mma mgbe niile ile anya na ndekọ akụkọ ihe mere eme gị na usoro iwu. Nke a ga - enye gị echiche doro anya banyere otu ị ga - esi gosipụta n ’ọghọm na uru.
Karịsịa, nke a ga-agwa gị ma atụmatụ gị ọ na-arụ ọrụ ma ọ bụ na ọ naghị arụ ọrụ. E kwuwerị, nke a bụ otu ebumnuche bụ isi ịnweta akaụntụ ngosi!
Kwụ na 5kwụ XNUMX - Gbanwee na Real Forex Broker Account
Olileanya, site na nke a, i meela ihe kachasị na akaụntụ ngosi gị, ma nwee usoro azụmaahịa gị ruo 't'. Ọ bụrụ na nke a na-ada ihe ziri ezi ma na ị na-enwe obi ike iji fee ụlọ ngosi demo ma mepee akaụntụ na onye na-ere ahịa ọhụụ zuru ezu, nke a kwesịrị ịdị mfe ịme.
Na-eche na ị na-arapara n'ahụ onye na-ere ahịa ị gara mgbe ị mepee akaụntụ ngosi, ohere ọ bụ bụ na ị nyela ọtụtụ ozi ị chọrọ iji setịpụ akaụntụ ọkọlọtọ. Ugbu a ị ga - achọ ịnye ID ID na ihe akaebe nke adreesị (nke a na-abụkarị ụgwọ ọrụ ma ọ bụ nkwupụta akụ).
Enweghị ụzọ gburugburu usoro ntinye aha a, ebe ọ bụ iwu chọrọ n'ọgụ a na-ebuso ịchụ ego, na ndị na-ere ahịa niile ga-agbaso iwu ndị a.
Ugbu a, ihe niile ị ga - eme bụ itinye usoro ịkwụ ụgwọ nke nhọrọ gị na ebe nrụọrụ weebụ na-ere ahịa, ma tinye ụfọdụ ego azụmaahịa na akaụntụ gị. Paymentzọ ịkwụ ụgwọ a na-ahụkarị bụ e-wallets (dị ka Paypal ịkpọ otu), akaụntụ akụ na debit / kaadị akwụmụgwọ.
Voila! Nwere ike ịmalite ịzụ ahịa na azụmaahịa azụmaahịa ụwa. Naanị cheta, ịnwere ike ịchọrọ ikuku site na ịmalite obere osisi.
Akaụntụ Akaụntụ Forex kacha mma na 2021
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-ere ahịa na ntanetị ugbu a na-enye akaụntụ ngosi nke ụdị ụfọdụ. Ka o siri dị, nke a nwere ike ime ka ọ sie ike ịmata ụdị ikpo okwu iji banye.
Iji nyere aka kpochapụ alụlụ ahụ, n'okpuru anyị depụtara ụfọdụ akụkọ ngosi ngosi kacha mma na 2021.
eToro nwere ike bụrụ ezigbo nhọrọ maka gị ma ọ bụrụ na ị na-amalite ụwa nke azụmaahịa azụmaahịa. Nke a bụ n'ihi na e mepụtara ikpo okwu maka ndị ahịa ọhụụ. Facilitylọ ọrụ akaụntụ ngosi ya na-abịa na njikwa akwụkwọ ahịa nke $ 100,000 - nke zuru ezu iji mụta ụdọ. Ga-enwe ọtụtụ ụzọ abụọ ị ga-esi họrọ. Forex adịghị maka ndị ọrụ US.
AVATrade bụ ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji akaụntụ ngosi gị site na MT4. Nke a bụkwa ikpe ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịwụnye ígwè ọrụ mgbanaka mgbanaka akpaaka, ebe nke a kwekọrọ na AVATrade. Ikpo okwu na-enye ọtụtụ ngwa ọgụgụ eserese dị elu, ị nwekwara ike ịnweta ngwa CFD ndị ọzọ dịka ebuka, ndeksi, na ngwaahịa.
Ihe ndekọ ego demo kachasị mma na-enye gị ohere ịnweta ahịa ahịa ego ụwa na-enweghị itinye isi obodo gị n'ihe ize ndụ. Nke a dị mma ma ọ bụrụ na ị bụ onye mbido, ebe ọ na-enye gị ohere ịmụ ụdọ nke ịzụ na ire ahịa ụzọ abụọ na-enweghị ihe egwu. N'akụkụ nke ọzọ nke ụdịdị dị iche iche, ihe ndekọ ederede demo kachasị mma na-eme ka ndị ahịa nwere ahụmahụ nwalee ma zuo oke ọhụụ ọhụụ na-enweghị itinye ego ụwa n'ezie na akara ahụ.
Na ngwụcha, ihe ngosi ngosi ọhụụ na-enye gị ohere ịmara nke ọma na ahịa ahịa na-agbanwe agbanwe, eserese, na ngwa njikwa ihe egwu - ihe niile achọrọ ka ị bụrụ ezigbo onye ahịa.
Kedu ihe bụ akaụntụ demo na mbụ?
Ihe ngosi ngosi okike Forex na-enye gị ohere ịzụ ahịa ụzọ abụọ na-enweghị itinye ego ọ bụla. Kama nke ahụ, ị ​​ga-eji ego akwụkwọ na-azụ ahịa.
Onye na-enye akaụntụ ngosi ngosi Forex?
Iji jiri akaụntụ demo Forex, ị ga-emepe akaụntụ na onye na-ere ahịa na ntanetị. Ozugbo i mere, ị nwere ike mgbe ahụ jiri na-ere ihe si demo akaụntụ eweta.
You nwere ike ịme ego site na akaụntụ ngosi ngosi
Mba, azụmaahịa ọ bụla ị debere dabere na ego akaụntụ ngosi. Dị ka ndị dị otú a, ị gaghị enwe ike ịme ego ọ bụla site na akaụntụ ngosi ngosi Forex!
Achọrọ m ibudata ngwanrọ iji jiri akaụntụ demo Forex?
Ọ naghị adịkarị mkpa ibudata ngwanrọ ọ bụla, ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-enye usoro ntanetị azụmaahịa. Site na nke ahụ, ọ bụrụ na ị na-eji onye na-ere ahịa na-akwado MT4 / 5, ị ga-enwe nhọrọ nke ibudata ngwanrọ na desktọọpụ gị.
Ego ole ka a na-enweta ego na demo akaụntụ?
Nke a ga - adị iche na onye na - ere ahịa na - ahia. Iji maa atụ, eToro na-enye $ 100,000 na ego akwụkwọ, ebe ụfọdụ ndị na-ere ahịa na-enye ihe pere mpe.
Ndi ihe ngosi ahia ahia ahia na ahia ahia?
Ihe ndekọ ederede kachasị mma na-enye gị ohere ịzụ ahịa na ọnọdụ ahịa ndụ. Nke a na achi achi na ị na-enwe ike ịmụta ụdọ nke Forex trading na irè n'ụzọ.
Ogologo oge ole ka m nwere ike iji akaụntụ ngosi azụmaahịa?
Fọdụ akaụntụ ngosi ngosi na-ejedebe na oge a kara aka tupu ewepụ ego. Agbanyeghị, ụfọdụ ndị na-ere ahịa na-enye gị ohere iji ụlọ ọrụ akaụntụ ngosi ha ogologo oge ịchọrọ. Mee elu mee ala, nke a bụ na ezi uche nke onye ịre ahia ị họọrọ.